We ngumnikazi phezu 20 injectors plastic elawulwa-khompyutha nomthamo 100-10000 igremu. Siye got 6 neminyango usethe, umnyango zokukhiqiza, R & D (izinto ezintsha & CAD / CAM isikhunta), ukungenisa & ukuthekelisa, ukuhweba yasekhaya, QC, agcine & zokuthutha. Siye got umthamo omuhle yokukhiqiza kanye ishede & zokuthutha. Umthamo wonyaka ukukhiqizwa tote hits 8 izigidi kanti isilinganiso umthamo yonyaka bangaba amathani 20000.
Isiqubulo sethu sithi "abantu, Ubuchule Quality". Thina ngobuqotho ngethemba nje ukuthi babekwazi lisungule eside futhi enobungane ubuhlobo ibhizinisi namakhasimende emhlabeni wonke ngentshisekelo mutual.